Red Seal Toothpaste - သွားတိုက်ဆေး(၇) မျိုး
Size : 110g 100g 75g
သွားအမျိုးအစားအလိုက် ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပြီး သွားနှင့် သွားဖုံးအတွက် ဆေးဖက်ဝင်အပင်နှင့် တွင်းထွက်ဓာတ်တစ်မျိုးတို့ ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အစွမ်းထက်သွားတိုက်ဆေး။
1. Natural SLS Free - မိသားစုတစ်ခုလုံး အတွက် အဓိက ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပြီး Paraben ပါဝင်ခြင်းမရှိဘဲ ဆေးဖက်ဝင်အပင်နှင့်သာ ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ခံတွင်းနံ့ဆိုးခြင်း၊ သွားဖုံးယောင်ကိုက်ခြင်း၊သွေးထွက်ခြင်းများ ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ အမြှုပ်အနည်းငယ်သာ ထွက်သည်။ Zinc Oxide သည် သွားနှင့်ခံတွင်း ကို ကျန်းမာ စေပြီး Calcium Carbonate သည် သွားများကို ဖြူဖွေး တောက်ပစေပါသည်။
2. Smokers - ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက် အဓိက ထုတ်လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပြီး အစာကြောင့်ဖြစ်စေ၊ အရက်သောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ဆေးရွက်ကြီးမှပြုလုပ်ထားတဲ့ ဆေးလိပ်ကြောင့်ဖြစ်စေ Dolomite Powder ပါဝင်နေလို့ အဝါရောင်သန်းနေတဲ့ သွားချေးတွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး သွားတွေကို ဖြူဖွေးစေပါသည်။
3. Herbal - သွားချေးတွေကို တိုက်ချွတ်ဖို့ နှင့် သွားပိုးစားခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးရန်အတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ Chlorophyll ပါဝင်လို့ ပါးစပ်တွင်း alkaline ဓာတ်ဖြည့်ပေးကာ သန့်ရှင်းလန်းဆန်းစေပြီး သွားပိုးစားခြင်းနှင့် သွားချေးများ ထူထပ်ခြင်းများ ကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ သဘာဝဆေးဖက်ဝင်အပင်များမှ ပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့် ပိုးမွှားများ ကိုလည်း ဆန့်ကျင်ပေးပါသည်။ Calcium Carbonate ပါဝင်ခြင်းကြောင့် သွားတွေကိုဖြူဖွေးစေပါသည်။
4. Baking Soda - ဒါလေးကတော့ ပါးစပ်နှင့် ခံတွင်းတစ်ခုလုံးကို လန်းဆန်းမှုပေးနိုင်တဲ့ သွားတိုက်ဆေးဖြစ်ပါသည်။ Baking Soda ဟာ (stain remover) စွန်းထင်းနေတဲ့ အရောင်များကို ဖယ်ရှားပေးခြင်းမှာ အလွန်အစွမ်းထက်ပါသည်။ မီးခိုးရောင် သန်းနေတဲ့ သွားများ၊ တိုက်ချွတ်ခက်တဲ့ သွားချေး များ ကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။
5. Lemon SLS free - ဒါကတော့ Homeopathics (ဓာတ်ကြမ်း) အာခေါင် ပါးစပ်တွင်း အနာ ရှိခြင်း၊ နာတာရှည် အနာ ဖြစ်ခြင်းများ အတွက် အထူး ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
6. Propolis - ပါးစပ်တွင်း အနာ၊ ရောဂါ ဖြစ်ခြင်း ကို သဘာ၀ အတိုင်း ကာကွယ်ပေးဖို့ နှင့် သွားဖုံးကျန်းမာရေး အတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
7. Kids - ကလေးများအတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ ကလေးများ နှစ်သက်သော အနံ့အရသာ လေးဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး သွားဖုံးနှင့် သွားကျန်းမာစေရန် အတွက် သဘာဝဆေးဖက်ဝင်အပင်များမှ ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
အသုံးပြုပုံ - မနက်တစ်ကြိမ်၊ ညတစ်ကြိမ် နှင့် အစားစားပြီးချိန်(သို့မဟုတ်)လိုအပ်သလို တိုက်ပေးနိုင်ပါသည်။
သဘာဝကြံရည်ထုတ်လုပ်နည်းမှ ရရှိသော သံဓာတ်၊ ကယ်စီယမ်၊ ဗီတာမင်၊ ကြွယ်ဝဖို့ red Seal Molasses
Visitors : 434684